Spike email application inowedzera odhiyo uye vhidhiyo mafoni kune macOS | Ndinobva mac
Ignacio Sala | 11/07/2021 17:00 | Noticias, Mac zvirongwa
Iyo inozivikanwa email sisitimu Spike, iyo inoderedza maemail kuti iite ivo vakaita senge chats, ichangobva kuvandudzwa kuwedzera chinhu chinonakidza kwazvo: vhidhiyo mafoni. Kutenda neiyi nyowani mashandiro, vashandisi vanogona kutaurirana munguva chaiyo usingashandise zvinoshandiswa nevechitatu.
Aya mashandiro matsva anotendera vashandisi kuita lodhiyo kana vhidhiyo kufona nemumwe munhu kana neboka kubva kuinbox kwako. Pamusoro pezvo, nhare dzakarongwa dzinogona kuverengerwa kukokero dzekendari yeSpike dzinobatana neGmail uye nevamwe vatengi veemail
Ndicho chekutanga chishandiso chinobatanidza ese mafomu ekutaurirana kwechikwata mubhokisi rako rekushandisa uye zvakare iri rekutanga application rinokutendera kuti ubve kubva kumavara kuenda kuzwi mameseji kuti urarame misangano yevhidhiyo.
Iyo kambani yakazviziva izvo rakawedzera basa rekure kwave kuri kukurudzira kukuru kwekuwedzera chinhu ichi.
Iyo mhenyu yekufona ficha inoshanda mukati meSpike maapplication eMac uye iOS. Asi pamusoro pezvo, varipo vanogona zviwane kubva kune chero webhu bhurawuza pasina kudiwa kweiyo chaiyo plugin kana kunyange Spike account, zvakanyanya seSkype (Microsoft), Zoom uye nyowani yeFaceTime mashandiro pane Android neWindows zvishandiso.
Spike's chinangwa ndechekuvaka yazvino uye yakajeka intiraiti yekudyidzana pachinenge ichigadzirisa workflows. Iko shanduko yemamiriro ezvinhu chinhu chinotishungurudza kwenguva yakareba nekuti isu tinoona iyo inopwanya sei kuisa pfungwa mukati mezuva rese. Misangano uye kufona zvinowedzera kusimbisa iyo pfungwa. Iko hakuna matsva maapplication ekudzidza, hapana matsva maakaundi ekugadzira, uye asisiri kuzama kuyedza kuti ndeapi mavhidhiyo musangano wekushandisa. Spike Email App: Mamwe masevhisi akasimba anouya.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Spike email app inowedzera odhiyo uye vhidhiyo mafoni kune macOS